Ukuphupha kwegadi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Izitiya zisinika indawo yokuphumla, ukuphumla kunye nokuzonwabisa, yiyo loo nto sithanda ukusebenzisa igama elithi igadi yeparadesi yase-Eden kwinto ebonakala ifanelekile kuthi. Kwabaninzi, bamele i-oasis yobuqu apho umntu anokukhululeka kuxinzelelo lobomi bemihla ngemihla. Kwangelo xesha, ziindawo ezilawulwa yindalo, kodwa zilawulwa ngabantu. Apha, umnini-gadi uthatha isigqibo ngokwakhe ukuba ukhetha ukutyala iinyibiba, i-yucca, iiroses, ii-snowdrops, i-marigolds, i-gorse okanye i-asters okanye mhlawumbi uthintele izityalo ezidubulayo ngokupheleleyo kwaye ukhetha izihlahla ezihlala ziluhlaza. Mhlawumbi unawo nomthi kwigadi yakho, njengomthi we-beech.
Ingcibi esebenzayo, igadi yakho ifuna ishedi apho ungagcina izixhobo kunye nezixhobo. Omnye uyithanda ngakumbi yothando kwaye ukhetha i-gazebo okanye ipaneli enebhentshi njengendawo entle yokudibanisa okungaphazanyiswa. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, kukho i-maze, ekucingelwa ukuba yongeze ukonwaba ngakumbi kwigadi yokuhlala-ukuyifumana ukusuka apha akusoloko kulula.
Igadi ikwanokubaluleka emaphupheni. Olunye lweempawu zamaphupha ezibaluleke kakhulu neziqhelekileyo, ezinokuthi zichazwe yimvelaphi yenkcubeko kunye nenkolo. Kodwa uchazwa njani ngokuchanekileyo "umyezo" wephupha?
1 Uphawu lwephupha «igadi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «igadi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «igadi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «igadi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko, igadi ephupheni inokuba sisiboniso se i-nostalgia Ndiyazi ukuphupha emva kothando kunye nomnqweno. Iqela elinomdla lifuna uthando, kodwa kunye nokuzonwabisa kunye nokulukuhla. Kwangaxeshanye, nangona kunjalo, oku kuya kuhlala kuhlala kuphantsi kolawulo lwephupha, yena ngokwakhe angathanda ukuthatha isigqibo, ngokoluvo ngokubanzi, ukuba uza kude kangakanani kwaye ashiye indalo kunye neemvakalelo zakhe.
Nabani na owenza okanye agcine isitiya ephupheni, umzekelo ngokusika izihlahla zakhe ngezixhobo zokucoca uthango, angazidlulisela kubudlelwane bakhe beemvakalelo: uzinikezela koku ebomini bokwenyani, ufuna imvisiswano kwaye ngale ndlela abonise indlela abaluleke ngayo oontanga bakhe kuye.
Ukuba ii-daisy okanye i-buttercups ikhula egadini ephupheni, oku kungabonisa ukulangazelela umntu omsulwa. uthando bhekisa. I-clover, etsala iinyosi kunye neenyosi ezinkulu, ibonisa ixesha lokonwaba, ngakumbi xa kukho izityalo ezininzi ezinamagqabi amane phakathi kwazo.
I-Chamomile njengesityalo segadi ihlala ibonisa impilo entle kuyo el mundo vuka. Ukubona komthi wom-amangile kwigadi yakho kungabonisa inkqubela phambili elungileyo. Ukuba unesityalo seminti kwigadi yakho ephupheni lakho, uya kuba nexesha elingafaniyo phambi kwakho. Ukubona kweeponiyoni egadini kuhlala kuthembisa ubomi obunothando obonwabisayo kubomi bokuvuka.
Ukubona igadi yemifuno, umzekelo iitumato, iletapeyisi zeRapunzel, iminqathe nezinye izinto, zihlala zixela into elungileyo yokuvuka kobomi njengomfanekiso wephupha.
Ukuhambahamba egadini kukwabonisa ukutolikwa ngokubanzi kwesimboli yephupha. ubomi obulungeleleneyo. Umntu ochaphazelekayo wanelisekile kwaye wonwabile nesiqu sakhe kunye nemeko yakhe yangoku, kwaye unembono entle ngobomi.
Ukuchasana kusebenza xa iphupha libona igadi engakhathalelwanga. Kule meko, izoyikiso ezinkulu kuye kungekudala. UkuphoxekaOku kunokwenzeka ngenxa yokuswela kwakhe umdla kubudlelwane phakathi kwabantu. Kuya kufuneka azame ukukhathalela ngakumbi abantu ababalulekileyo kuye kwaye ahlakulele ubudlelwane bakhe, nokuba kuthatha ixesha kunye nomzamo.
Ukuba i-mole iyigcwalisile igadi ngeenduli ezingathandekiyo, oku kungabonisa iingxaki ukuba umntu ophuphayo, ukuba akalumkanga, unokuzikhubeka ngokulula. Ukuba umba imingxunya egadini ngokwakho ngomhlakulo, oko kungabonisa umsebenzi onzima.
Ukuba iphupha libona umphanda egadini ngelixa uleleyo, umzekelo ngenkunkuma yebhayoloji okanye njengesikhongozeli sokuqokelelwa kwamanzi emvula, umfanekiso ufuzisela abantu kunye neemeko kude kube ngoku azithathelwa ngqalelo. Ezi zinokumenzakalisa umntu, ke isikhongozeli sicebisa ukuba uqaphele.
Ukuba ujonga ooqongqothwane baseSt.John ebumnyameni begadi yakho, imfihlo egcinwe kakuhle inokutyhilwa kwihlabathi elivukayo. Ukuba kukho izixhobo ezahlukeneyo zokudlala ephupheni, umntu kufuneka ajongane namathuba anikezelwe ebomini bokuvuka.
Ukuba iintaka ziyavela kwigadi ephuphayo, enje ngomthi womthi, oku kuhlala kubhekisa kumnqweno wokuphila ngobuchule kunye nothando lwenkululeko ekuvukeni kobomi.
Uphawu lwephupha «igadi» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokombono wengqondo, igadi ephupheni ihlala ifanekisela ubudlelwane obufana no-de Yonwabela ubomi, ukukhula y Ukuchuma balawulwa. Oku kunokusebenza nakwimiba yesini yesibini.
Ukukhula ngakumbi kunye nokuqaqamba kwegadi kusephupheni, kokukhona ukoneliseka (ngokwesondo) ukuba umntu lowo kuthethwa ngaye uziva ekuzihlanganiseni kwabo. Unokwazi nokuba ungazi kwaye unomdla wokuvumela ubomi obutsha buvele kule nto. Ukuba igadi ikhumbuza imandala xa ulele, oku kunokubonwa njengophawu lobomi bonke.
Isimboli yamaphupha itolikwa kancinci malunga ne-psychoanalysts xa igadi ijikelezwe ziindonga eziphakamileyo okanye ucingo okanye i-palisade. Kule meko, iqela elinomdla liyasongela engenabantuKuba ugcinwe kakhulu kwabanye abantu, akafuni kuveza nantoni na ngaye, kodwa uhlala yedwa. Ukuphupha kufuneka uzame ebomini bokwenyani ukusondela kwabanye abantu kwaye uvulele kubo.
Nabani na onokubona igadi ngokujija kumnyhadala wephupha uphuphuma ngokoqobo yijoie de vivre, kodwa ngokuchanekileyo ngenxa yolu lonwabo lonwabisayo, kunzima ukugxila kwinjongo enye. Ixhoba kubonakala ngathi lihlala liphazamiseka. Umntu kufuneka athathe umfanekiso wephupha lokujinga njengethuba lokucothisa iimvakalelo kwaye angaze afune ukwenza imisebenzi emininzi.
Uphawu lwephupha «igadi» - ukutolika kokomoya
Igadi ifanekisela oko ngokwenkcazo yamaphupha okomoya iparadesi. Kwangelo xesha, iphupha liquka isicelo kumntu ochaphazelekayo sokuba azivumele ukuba aphumle kwaye aphumle kwaye ngale ndlela enze amandla amatsha.